Free Headstrong EA - Best Forex EA | Expert Advisors | FX Robots
HomeFree Forex EAsFree Headstrong EA
Fanamarihana: Ity Forex maimaim-poana ity dia tsy misy intsony amin'ny vahoaka!
Headstrong Free Expert Advisor dia scalper tandans izay mampiasa ny endriky ny marika toy ny Bbands, RSI, ADX, ary Moving Averages.
Headstrong EA dia novolavolaina ho an'ny varotra EURUSD ary USDJPY ary ny fotoana voafaritra amin'ny M5. Tsotra ny paikady: mivarotra mivarotra varotra any amin'ny faritra efa nilaozan'ny toetr'andro, rehefa mipoitra ny fironana, ary mifampizara mivarotra amin'ny varotra lehibe rehefa mivelatra. Ny famaranana ny varotra dia atao amin'ny alàlan'ny Take profit (amin'ny pips) na amin'ny ADX + RSI (fijanonana ny fatiantoka).
Tsy toy ny dikan-teny manontolo, Headstrong Free Ny baiko mivelatra amin'ny 0.01 ihany no lehibe.
Free Headstrong EA dia tsy mampiasa paikady mampidi-doza toy ny martingale, grid, sns.
The Forex Expert Mpanolotsaina miasa manodidina ny famantaranandro miaraka amin'ny fametrahana mari-pahaizana, dia mampitombo ny Max_Orders amin'ny 50 na mihoatra.
Free Headstrong EA - Parameters
Max_Spread - raha mihoatra ny vidiny ny fiparitahana, dia tsy hisy fanamafisana.
Max_Slippage - Fialofana avoakan'ny MAIKA.
Stop_Loss - Atsaharo ny fatiantoka amin'ny pips.
Take_Profit - maka tombony amin'ny pips.
Fast_MA - ny lanjan'ny vanim-potoana hanombanana ny Moving Average.
Fast_MA Method - fomba haingana MA.
Slow_MA - ny lanjan'ny vanim-potoana hanombanana ny Moving Average.
Slow_MA fomba - fomba fitarihana MA.
Max_Orders - maromaro ny baiko misokatra.
Ny isa majika - tarehimarika miavaka ahafantarana ny baiko.
Mandroso eo ho eo ny
potoana hanombohana ny fijanonana
endriky ny marika
ny vidin'ny vanim-potoana